Sawirro: Alshabaab oo soo bandhigay gaadiid dagaal oo ay kala wareegeen milateriga Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 22 March 2016
Mareeg.com: Alshabaab oo habeen hore weerar culus ku qaaday saldhiga milateriga Laanta Buuro ee gobolka Shabeellaha Hoosee ayaa soo bandhigay 9 gaadiid ah oo ay ka qabsadeen milaterigii deganaa xeradaas.
Gaadiidka Alshabaab soo bandhigeen ayaa kala ah 7 gaari oo dagaal, gaari booyad saarantahay iyo gaari yar oo ah Nuuca CARIB.
Sidoo kale, Alshabaab ayaa soo bandhigay hub u badan baasuukayaal, kaasoo ay sheegeen iney ka qabsadeen milateriga.
Taliska milateriga ayaa shalay beeniyey in Alshabaab la tageen gaadiid badan, waxeyna sheegeen iney dib uga soo celiyeen gaari ciidan oo ay xerada ka qaateen.
Sawirradaan waxaa baahiyey warbaahina Alshabaab, mana jiro wax war ah oo ay dowladda Soomaaliya kasoo saartay sawirradan iyo sheegashada Alshabaab.
Sawirro: Puntland oo soo bandhigtay maxaabiis Alshabaab oo ay ku qabatay dagaalkii Suuj